कयौ फिल्मको अफर, एक कारण आलिया र रणवीर गर्दैनन् संगै काम ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodकयौ फिल्मको अफर, एक कारण आलिया र रणवीर गर्दैनन् संगै काम !
April 1, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
बलिउडका चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता रणवीर कपूरको जोडी वास्तामानै निकै चर्चामा रहेको छ । यो जोडीलाई बलिउडका कयौ निर्देशकले एकसाथ पर्दामा ल्याउन खोजि रहेका छन् ।
तर आलिया र रणवीरले एकसाथ काम नगर्ने बताएका छन् । भारतीय सन्चार माध्यमका अनुसार, यी जोडीलाई लव रंजनको फिल्ममा देखाईने भनिएको थियो । तर पछि आलियाले संगै काम नगर्ने भनिन भन्ने खबर बाहिरियो ।
खासमा यी दुईसंगै काम नगर्नुको एक मुख्य कारण छ । सार्वजनिक खबरका अनुसार, फिल्म ब्रह्मास्त्र काम गरिरहेको हुनाले यी दुईले अर्को फिल्ममा संगै काम नगर्ने भनेका हुन् । जबसम्म ब्रह्मास्त्रमा काम सकिदैन तबसम्म यी दुईले संगै अन्य फिल्ममा साइन नगर्ने भएका हुन् ।
ब्रह्मास्त्रको १५० दिनको छायांकन अझै सकिएको छैन । सोहि कारण अन्य फिल्ममा यी दुईले संगै काम गर्न सम्भव छैन ।